Usoro kachasị mma maka itolite Blog gị Martech Zone
Ma ọ bụ blog nke gị ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ gị, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị n'ịntanetị na-eto eto.
Tags: leleeobe ọwa njikarịchamelite nsonaazụahia ọwaWriting
Ebube post Doug!
Mgbe ụfọdụ, m na-eche ihe kpatara na Janis anọkwaghị bụ na ụwa enweghị ike ijikwa oke ncheta ahụ n'ahụ otu nwanyị.
Jun 30, 2008 na 8:16 AM
Hey, nke ahụ bụ m gig! Otú ọ dị, nhọrọ dị mma. Chee na m ga-agbanye mgbatị maka ihe ngosi Janis dị mma.
Jul 2, 2008 na 9: 04 AM
Ma, enweghị m ike ịkwọ abụ, ma ya fọdụzie ịbụ abụ ka Janis. Mara m na m ga-ahụ ihe ọzọ.